तपाईंले थाहा पाउनुपर्ने ७ प्रसिद्ध चित्रकार | अनलाइन क्रिएटिभहरू
मेरी गुलाब | | कलाकारहरू
भिजुअल सन्दर्भहरूको खोजी प्रेरणाको स्रोतको रूपमा आवर्ती सम्पत्ति हो कलाकारहरू, डिजाइनरहरू र चित्रकारहरू बीच। ठिक छ, यो डिजाइन शैली वा अर्को सिर्जना गर्दा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चरणहरू मध्ये एक हो। सायद तपाईलाई चित्रणको क्षेत्रमा धेरैलाई थाहा छैन, त्यसैले आज हामी तपाईका लागि प्रसिद्ध चित्रकारहरूको श्रृंखला ल्याएका छौं।
हामी तपाईंलाई उनको जीवन र शैलीको बारेमा थोरै बताउनेछौं। Ya en la वास्तविकidad, तिमी हो ilप्रसिद्ध Ustradoras विश्वव्यापी सन्दर्भ हुन व्यवस्थित छन्।हाल तिनीहरूको काम सबैद्वारा मान्यता र स्वीकार्य छ, तिनीहरूमध्ये प्रत्येकको आफ्नै शैली छ।
17प्रसिद्ध महिला चित्रकारहरू
1.2 लुसिया गुटेरेज
1.3 इभा भाज्ज
1.4 सारा फनेली
1.5 एनी जोन
1.6 पाउला ट्रोक्सलर
1.7 नरिवल लेखक
7 प्रसिद्ध महिला चित्रकारहरू
तल हामी तपाईंलाई7प्रसिद्ध चित्रकारहरूको बारेमा बताउँछौं, जसले आफ्नो व्यावसायिक करियरमा पुरस्कृत भएका छन् र विश्वभरका धेरै प्रसिद्ध संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेका छन्।
स्रोत: पाउला बोनेट
पाउला बोनेट ए भ्यालेन्सियन चित्रकार, चित्रकार र लेखक, डिसेम्बर 10, 1980 मा जन्मिएको थियो। उहाँ हाल बार्सिलोनामा बसोबास गर्नुहुन्छ। उनले भ्यालेन्सियाको पोलिटेक्निक युनिभर्सिटीमा ललित कलामा स्नातक गरेकी छिन् र चित्रकला र लेखनमा विशेषज्ञ छिन्। 2002 मा उनले प्रोमो छात्रवृत्ति प्राप्त गरे, जसको साथ उनले सान्टियागो डे चिलीको क्याथोलिक विश्वविद्यालयमा आफ्नो अध्ययन पूरा गरे। 2006 मा उनले अर्को छात्रवृत्ति प्राप्त गरे, जसको साथ उनी NYU मा अध्ययन गर्न न्यूयोर्क गए।
आफ्नो करियरको सुरुमा उनले तेल चित्रकला र नक्काशीमा ध्यान केन्द्रित गर्ने निर्णय गरे। तर 2009 मा उनले निर्णय गरे आफ्नो करियरलाई चित्रणमा केन्द्रित गर्नुहोस्। त्यस वर्षदेखि, उनले आफ्नो तेल चित्रकला र नक्काशीको प्रविधिलाई सिद्ध गरे। 2018 मा उहाँले सांस्कृतिक योग्यताको पदक प्राप्त गर्नुभयो (जनरलिटेट भ्यालेन्सियानाबाट उच्च भिन्नता)। उहाँसँग छ सहयोग गरेको जस्तै पत्रिकाहरूमा देश, डायरी आरा y eldiario.es.
लुसी गुटिएरेज ए क्याटलान चित्रकार, विश्वव्यापी रूपमा परिचित। उनको जन्म बार्सिलोनामा सन् १९७७ मा भएको थियो शैली परिष्कृत र व्यंग्यात्मक छ, सन्दर्भ प्रेम सम्बन्ध, प्रलोभन र मानव व्यवहारको रूपमा लिन्छ। उनको कला पुस्तकहरू, एनिमेसनहरू र विज्ञापन अभियानहरू, विभिन्न मिडिया र विभिन्न देशहरूमा पनि साकार भएको छ। उनले द न्यु योर्कर, द न्यूयोर्क टाइम्स, द वाशिंगटन पोस्ट र द वाल स्ट्रीट जर्नल जस्ता अखबारहरूमा काम गरेका छन्।
उहाँका सबैभन्दा प्रसिद्ध कार्यहरू मध्ये हामीले "अंग्रेजी सजिलो छैन", "मिस ग्यालासिया" वा "ला भलिगिया डेले काराबाटोल" पाउँछौं।
स्रोत: इभा भाजक्वेज
Eva Vazquez एक हो म्याड्रिडबाट चित्रकार। उनले आर्किटेक्चर र एनिमेसनको अध्ययन गरिन् र सुरुमा फरक बाटोहरू भएको देखिन्थ्यो, तर अन्ततः तिनीहरू एकसाथ आए र उनलाई एनिमेटेड श्रृंखला र फिल्म पृष्ठभूमि निर्माणहरू समावेश गर्ने संसारमा लैजानुभयो। उसको बलियो पुल यो हो कि उसले कल्पना गर्न सक्ने सबै भवनहरू कोर्न सक्छ, सबैभन्दा यथार्थवादी देखि सबैभन्दा उत्कृष्ट सम्म।
नतिजाको रूपमा, उनी हाम्रो देशको प्रकाशन संसारसँग सम्बन्धित सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र अद्वितीय चित्रकार बनिन्। उसको काम काल्पनिक र चित्रणमा केन्द्रित छ, जसको मानसिक अभ्यासलाई शैलीगत रूपमा परिभाषित गरिएको रूपमा संरचनागत रूपमा विचारहरूको संश्लेषणद्वारा परिभाषित गरिएको छ। उहाँ हाल अखबारहरू, पुस्तकहरू, व्यावसायिक पत्रिकाहरू, इत्यादिमा चित्रण गर्न समर्पित हुनुहुन्छ।
सारा फनेली (जन्म १९६९) एक हुन् बेलायती कलाकार र चित्रकार इटालीको मूल निवासी, सबै भन्दा राम्रो उनको चित्रित बाल पुस्तकहरु को लागी परिचित। उनी इटालीको फ्लोरेन्समा जन्मे र हुर्केका थिए। उनले Liceo Classico Michelangelo मा अध्ययन गरे। पछि उनी ग्राफिक डिजाइन र इलस्ट्रेसन अध्ययन गर्न लन्डन गए। रोयल कलेज अफ आर्टमा उनको अन्तिम वर्षमा साराले बच्चाहरूको चित्रणको संसार पत्ता लगाइन्। उनको सबैभन्दा प्रसिद्ध पुस्तकहरू मध्ये एक बटन थियो। जसको लागि उनले चिल्ड्रेन पिक्चर बुक इलस्ट्रेसनको लागि म्याकमिलन पुरस्कार प्राप्त गरे। त्यसबेलादेखि यस बेलायती चित्रकारले लगभग 20 पुस्तकहरू प्रकाशित गरिसकेका छन्।
उनको शैली र प्रविधिको सन्दर्भमा, साराले कोलाज र सामग्री र फन्टहरूको धेरै सावधानीपूर्वक संयोजन प्रयोग गर्दछ। उनले न्यूयोर्क टाइम्स, द न्यू योर्कर, र पिंगुइन, फेबर र फेबर, टेट ब्रिटेन, टेट मोडर्न वा भिक्टोरिया र अल्बर्ट संग्रहालय जस्ता महत्त्वपूर्ण मिडियासँग सहकार्य गरेका छन्।
Ana जुआन (1961, भ्यालेन्सिया) es una de Las सबैभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त स्पेनी चित्रकारहरू. Su कला ha Sido सार्वजनिकहलचल en रेभists como El País, El मुखo, राष्ट्रिय भौगोलिक यात्राer, Elle, marie क्लेयर, यो नयाँ यॉर्कर, समय, मान्छे o न्यूजवीक। जस्ता पत्रिकाहरूसँग पनि उनले सहकार्य गरेका छन् ला लुना डे म्याड्रिड र म्याड्रिज, उनीहरूका लागि आजसम्मको मात्र कमिक्स प्रदान गर्दै, सबै कालो र सेतो र अभिव्यक्तिवादी टिन्टहरूमा।
Ana जुआन ha Sido una de Las क्याटालानमा बाल साहित्यका अग्रगामीहरू, त्यो भाषामा तीस भन्दा बढी शीर्षकहरू प्रकाशित छन्। Ha obयोम गर्छु संख्याosos premiOS como ilUstरेडORAeनवप्रवर्तनadORA, entre otROS p प्राप्त गरे2010 मा स्पेनको संस्कृति मन्त्रालयको चित्रणको लागि राष्ट्रिय पुरस्कार।
स्रोत: पाउला ट्रोक्सलर
पावललेa ट्रोxको es una विलिसाउ (स्विजरल्याण्ड) बाट चित्रकार र ग्राफिक डिजाइनर)1981 मा जन्मिएको थियो। En उसको कामले रंगहरू र बच्चाहरूको र शिशु चित्रहरूलाई हाइलाइट गर्दछ. Su trabलसुन se ha म्यादuEsto en विविधas म्यादosआइकनयो धेरै मा छ Suइजा को रूपमा extभाग्योjero. उनले कला र डिजाइनमा लागू विज्ञान विश्वविद्यालयमा भिजुअल कम्युनिकेशनको अध्ययन गरे, जहाँ उनले चित्रणमा विशेषज्ञता हासिल गर्नेछन्। 2006 मा उनले बर्लिनमा आफ्नै स्टुडियो स्थापना गर्ने निर्णय गरिन्, जहाँ उनले एक स्वतन्त्र चित्रकारको रूपमा आफ्नो क्यारियर सुरु गर्नेछिन्। अन्ततः 2008 मा, उसले ज्यूरिच जाने निर्णय गर्यो, जहाँ उनी हाल बस्छन् र काम गर्छन्।
Es चित्रकार र प्लास्टिक कलाकार। उहाँ Quintanar del Rey (Cuenca) मा जन्मनुभएको थियो। केवल 14 वर्षको उमेरमा, यो चित्रकारलाई थाहा थियो कि उनी ललित कला पढ्न चाहन्छिन्। उनले फाइन आर्ट्समा स्नातक गरे, तर केही समयको लागि उनले फोटोग्राफीमा ध्यान केन्द्रित गर्ने निर्णय गरे। अन्तमा, उहाँले रेखाचित्र र चित्रणमा आफूलाई पूर्ण रूपमा समर्पित गर्ने निर्णय गर्नुभयो। उनको प्रेरणा उनको चिन्ता, प्रतिबिम्ब र विचारहरु द्वारा दिइएको छ। यसले प्रेम, जलवायु परिवर्तन, स्वार्थ वा आशा जस्ता विषयवस्तुहरूसँग व्यवहार गर्दछ। Grijalbo, Casio वा Glamour Spain जस्ता ब्रान्ड र प्रकाशकहरूसँग सहकार्य गर्नुहोस्।
यदि तपाई सोच्नुहुन्छ कि यो लेखले तपाईलाई थोरै चिनेको छ। यहाँ म तपाइँलाई स्पेनी चित्रकारहरूको अर्को सूची छोड्छु, जुन तपाइँलाई थाहा थिएन।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » कलाकारहरू » प्रसिद्ध चित्रकारहरू